I-MyPathologyReport.ca - Imfundo ye-Pathology yeziguli
Thola ukuxilongwa kwakho
I-MyPathologyReport.ca iyithuluzi lemfundo yezokwelapha elifinyeleleka mahhala elakhiwe odokotela bezifo ukuze basize iziguli zifunde futhi ziqonde imibiko yazo yokugula.
Kubuyekezwe: May 19, 2022
Ingabe usukulungele ukufunda kabanzi mayelana nokuxilongwa kwakho kanye nolwazi olutholakala embikweni wakho we-pathology? Lesi sigaba sihlanganisa ama-athikili achaza izifo eziningi ezivame kakhulu ze-pathologic.
Isichazamazwi sethu se-pathology esilungele isiguli sinikeza izincazelo zamagama ajwayelekile nemishwana esetshenziswa odokotela bezifo emibikweni ye-pathology.
Ngokushesha thola izimpendulo zemibuzo evame ukubuzwa mayelana nemibiko yokugula. Izimpendulo ezibhalwe ngochwepheshe bethu futhi zabuyekezwa ngu ithimba lethu yabeluleki abanesineke.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe ngale sayithi, xhumana nathi ku [i-imeyili ivikelwe].
Disclaimer: I-MyPathologyReport.ca iyinhlangano esiza abantulayo engenzi nzuzo ebhalisiwe (769563271RR0001). Ama-athikili aku-MyPathologyReport enzelwe izinjongo zokwaziswa okuvamile kuphela futhi awakhulumi ngezimo ngazinye. Izindatshana ezikule sayithi azithathi iseluleko sezokwelapha esichwepheshile, ukuxilongwa, noma ukwelashwa futhi akufanele kuthenjelwe kukho ekwenzeni izinqumo ngempilo yakho. Ungalokothi uzibe iseluleko sezokwelapha esichwepheshile ekufuneni ukwelashwa ngenxa yento oyifundile kusayithi le-MyPathologyReport. I-MyPathologyReport iphethwe futhi iyasebenza futhi ayixhunyanisiwe nanoma yisiphi isibhedlela noma iphothali yesiguli.
Copyright © 2021. Wonke amalungelo agodliwe. Inqubomgomo yobumfihlo
Umsebenzi wethu usekelwa ngokukhululekile: